सापकोटा दम्पत्ति सुरक्षाकर्मीलाई लस्सी र खाजा खुवाउँदै ! – Khabarhouse
सापकोटा दम्पत्ति सुरक्षाकर्मीलाई लस्सी र खाजा खुवाउँदै !
Khabar house | २४ चैत्र २०७६, सोमबार ०६:३२ | Comments
बालबिक्रम कार्की, रौतहट। सरकारले को;रोना भाइरस अर्थात को’भिड –१९ को संक्रमण फैलिन नदिन देशैभर लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना गराउन सुरक्षाकर्मीहरु अहोरात्र खटिरहेका छन् । अन्य समय हरुमा भन्दा उनीहरुको ड्युटी गर्ने समय पनि बढेको छ । पर्याप्त सुरक्षा पहिरन र साधन विना नै सुरक्षाकर्मीहरु कोरोना वि’रुद्धको यु’द्धमा होमिएका छन् ।
यसरी सुरक्षाकर्मी स्वयमनै कोरोनाको संक्रमणको जोखिममा रहेका छन् । यसरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि खटिरहेका सुरक्षाकर्मीलाई जनताले पनि साथ, सहयोग र धन्यवाद दिइरहेका छन्। रौतटह जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का सापकोटा दम्पत्तिले जनताको सुरक्षाको निम्ति खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई निशुल्क लस्सी तथा खाजा खुवाएका छन् ।
दिलिप सापकोटा र जानुका कार्की सापकोटा दम्पत्तिले लकडाउन अवधिमा चन्द्रनिगाहपुर मेनचोकमा डिउटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई लस्सी तथा खाजा खुवाएका हुन्। उनीहरुले सुरक्षाकर्मीलाई डियुटी गरेका स्थानमै गएर तथा आफ्नो डेरीमा बोलाएर लस्सी खुवाए का थिए । दिनभरी लकडाउन पालना गर्न तातोघाममा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मीलाई चिसो लस्सी खुवाउने काम गरेको दिलिप सापकोटाको भनाइ छ । उ
हाँले हाम्रो स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी प्रति एक नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको बताउँदै यसलाई लकडाउन अवधिभर जारी राख्ने जानकारी दिनुभयो। ‘प्रहरी मेरो साथी’भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउन सानो भएपनि सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्न पाएकोमा निकै खुसी लागेको जानुका कार्की सापकोटा बताउनु हुन्छ । चन्द्रनिगाहपुर चोकमा प्रणामी डेरी सञ्चालन गर्दै आउनु भएका दिलिप सापकोटा चन्द्रनिगाहपुर सिटी जेसिसका वर्ष २०२० का अध्यक्ष हुन् भने जानुका कार्की सापकोटा वर्ष २०१९ को उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ ।
युवाहरुले बाँडे पानी र मास्क : यताचन्द्रपुरका युवाहरुले सुरक्षाकर्मीहरुलाई मास्क,पानी,सेनिटाइजर वितरण गरेका छन्। लगडाउन अवज्ञा गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न ठाउँमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पिउने पानी र मास्कको अभाव भए को महसुस गर्दै चन्द्रनिगाहपुर युवा समुहले उत्त सामग्री वितरण गरेका हुन्। दिनभरी विभिन्न ठाउँ मा खटिएको प्रहरी धेरैको सम्पर्कमा आउने भएकाले पिउने पानी समेतको अभाव भएकोले साथीहरु मिलेर योकार्य गरेको स्थानीय युवा अभिषेक राना मगरको भनाइ छ ।